खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफा घटेसँगै रिलायन्स फाइनान्सको नाफा घट्यो
फागुन ४, काठमाडौं । रिलायन्स फाइनान्स कम्पनीले चालू आवको दोस्रो त्रैमासीक वित्तीय विवरण मंगलवार सार्वजनिक गरेको छ । उक्त वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको नाफा गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा ८७ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
कम्पनीले गत आवको दोस्रो त्रैमासमा रू. ६ करोड २२ लाख नाफा कमाएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा घटेर रू. ७७ लाख २८ हजारमा सीमित भएको हो ।
चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफा कमि आएसँगै नाफा घटेको हो । साथै, कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा बढेकाले पनि नाफा घटेको देखिन्छ । गत आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेकोमा चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा बढेर ४ दशमलव ७९ प्रतिशत पुगेको छ ।
चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा रू. ३ करोड ७५ लाख रहेको छ । चुक्तापूँजी रू. ८३ करोड २४ लाख रहेको कम्पनीले जगेडा कोषमा रू. १८ करोड ७९ लाख, रिटेन्ड अर्निङमा रू. १५ करोड ३९ लाख र शेयर प्रिमियममा रू. ११ लाख ४१ हजार सञ्चित गरेको छ ।
प्रतिशेयर आम्दानी रू. १ दशमलव ८६, मूल्य आम्दानी अनुपात १०५ दशमलव ०२, तरलता अनुपात २८ दशमलव ९३ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १४१ दशमलव २२ पुगेको हो ।